विविध Archives - paschimelinews
चैत्र १६, २०७८ चैत्र १६, २०७८ पश्चिमेली न्युजLeaveaComment on उखरमाउलो गर्मीमा सिरक वितरण
तराई–मधेशमा यतिबेला गर्मी बेस्सरी बढेको छ । उखरमाउलो गर्मीले सर्वसाधारणलाई सकस पर्ने गरेको छ । गर्मी छल्न सर्वसाधारणहरु पंखा, एयरकन्डिसन, कुलर, रुख वृक्षलगायतका छहारी स्थानको खोजीमा हुन्छन् । तर गर्मीका बेला धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाले सिरक र कम्बल वितरण गरेको छ । अन्य स्थानीय तहहरुले जाडोबाट छल्न सिरक र कम्बल मंसिर पुसमै वितरण गरेपनि धनुषा बटेश्वर […]
चैत्र ५, २०७८ चैत्र ५, २०७८ पश्चिमेली न्युजLeaveaComment on नाम स्मार्ट सिटी, बासिन्दा पानी नपाउँदा काकाकुल
तुलसीपुर : स्मार्ट सिटीको नाम दिइएको तुलसीपुर बजारदेखि १३ किलोमिटर दूरीमा रहेको कल्ले–बल्लेका बासिन्दा अहिले पानी नपाउँदा काकाकुल बनेका छन् । धारा जडान गरिएको छ । घरअगाडि नै पाइप पुगे पनि पानी आउँदैन । बर्सातमा पानीको सहज आपूर्ति हुने भए पनि हिउँदमा भने तुलसीपुर उपमहानगरपापिलका–३का आधा दर्जन गाउँ काकाकुल हुन्छन् । धारामा पानी नआएपछि तीन […]
बंगुरको मुटु राखेर बाँचेका पुरूषको निधन
फाल्गुन २५, २०७८ फाल्गुन २५, २०७८ पश्चिमेली न्युजLeaveaComment on बंगुरको मुटु राखेर बाँचेका पुरूषको निधन
बंगुरको मुटु राखेर झन्डै दुई महिना बाँचेका पुरूषको निधन भएको छ। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार गत पुसमा बंगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएका ५७ वर्षीय डेभिड बेनेटको मंगलबार युनिभर्सिटी अफ मेरिल्यान्ड मेडिकल सेन्टरमा निधन भएको हो। उनको शरीरले बंगुरको मुटुलाई अस्वीकार गरेका कारण मृत्यु भएको हो कि अरू नै कारणले हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। उनमा बंगुरको […]
कस्तो लुगा लगाउने ? यी हुन् गर्मी मौसममा पुरुषका लागि स्टाइलिस् लुगाहरू
फाल्गुन २०, २०७८ फाल्गुन २०, २०७८ पश्चिमेली न्युजLeaveaComment on कस्तो लुगा लगाउने ? यी हुन् गर्मी मौसममा पुरुषका लागि स्टाइलिस् लुगाहरू
गर्मी मौसम सुरु भएसँगै कस्ता लुगा लगाउने भन्ने सबैको चासोको विषय हुन्छ । मौसमअनुसारको पहिरन लगाउनु हरेकको चाहना भइसकेको छ । अझ फेसन रुचाउने जोकोही अरूभन्दा भिन्न पहिरनमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । फेसनमा महिला मात्र नभएर पुरुष पनि अगाडि रहेका छन् । कस्तो लुगा लगाउँदा राम्रो देखिन्छ भन्ने सधैँ चाँसोको विषय हुन्छ । मौसमअनुसार […]
सामी परियोजनाको प्रगति समिक्षा
फाल्गुन १९, २०७८ फाल्गुन १९, २०७८ पश्चिमेली न्युजLeaveaComment on सामी परियोजनाको प्रगति समिक्षा
नेपालगन्ज : बाँकेमा संचालित सामी परियोजनाको प्रगति समिक्षा गरिएको छ । इन्रुडेक बाँकेले संचालन गरेको उक्त परियोजनाका कारण भएका उपलव्धी र आइपरेका समस्याका बारेमा चर्चा गरिएको थियो । आज बसेको समिक्षा बैठकमा रोजगार प्रर्वद्धन कार्यक्रम अन्तरर्गत सुरक्षित आप्रवास (सामी) परियोजनामा स्थानिय सरकारले थप चासो बढाउन पर्नेमा जोड दिइएको थियो । परियोजनाका मुख्य उदेश्य सुचनामा पहुच […]
असार ११, २०७८ असार ११, २०७८ पश्चिमेली न्युजLeaveaComment on जाजरकोटकी एक महिलाको भारतमा बलात्कारपछी हत्या
भारतमा जाजरकोटकी एक महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । धन कमाउनको लागि भारतको हिमाचल प्रदेश रिकांगपिओ पुगेकी जाजरकोट भेरी नगरपालिका डिंगा स्थायी घर भएकी बर्ष ३८ की नेने रानाको बलात्कारपछी हत्या भएको हो । भारतीय संन्चार माध्यमका अनुसार संगै कमाउन गएका रानाको आफ्नै देवर र भिनाजुले हत्या गरेको बताएका छन् । रानाको हत्या गरेको आरोपमा […]